1. I-National Natural Science Olympiad yiprojekthi exhaswa ngemali yi-South African Agency for Science and Technology Advancement (SAASTA). Injongo yale Olimpiyadi:
kukudala umdla wesayensi kubafundi nokubakhuthaza ukuba benze izifundo zesayensi kwiSigaba seMfundo noQeqesho oluQhubelekayo (Further Education and Training Phase (FET));
kukuqaphela abafundi beeSayensi zeNdalo abaziintshatsheli kuzwelonke;
kukuxhasa ootitshala beeSayensi zeNdalo nasekuphuculeni indlela abafundisa ngayo eklasini; kunye
nokuqaphela italente efumaneka kubafundi beeSayensi zeNdalo.
2. I-Olimpiyadi luviwo oluhlupheza ingqondo (stimulating activity) olufuna abathathinxaxheba babonise ukuqiqa (critical thinking), ukukwazi ukusombulula iingxaki (problem-solving abilities), ingqondo yokukwazi ukuvelisa izinto ezintsha kwanesiphiwo sokuyila (innovativeness and creativity). Le nkqubo ixhasa isicwangciso i-Western Cape Education Department's (WCED) strategy for Mathematics and Physical Science. Kukho amabhaso angayiwayo aya kuphunyelelwa ngabo bafundi baziintshatsheli kwi-Olimpiyadi.
3. Impumelelo engumndilili yephondo kumaBakala 4 ukuya ku-6 inyuke ukusuka ku40,5% ngo2015 yaza yangu-42% ngo2016. Ukanti kumaBakala 7 ukuya ku-9 inyuke ukusuka ku40,5% ukuya ku43,3% ku2016.
4. La mabhaso alandelayo aye anikwa abaphumeleleyo eNtshona Koloni kwinqanaba likazwelonke (national category):
Igama lesikolo Ii-inishiyali nefani yomfundi Ibakala Abafundi abawongwayo Indawo akuyo umfundi kuzwelonke % Ibhaso
Kristenhof Primary D Sumeruk (76%) 7 Ngumfundi oyintshatsheli kwiBakala 7 1 76 Ithablethi
Parklands College RS Sparg (81%) 8 Ngumfundi oyintshatsheli weBakala 8 2 81 Ithablethi
5. I-Olimpiyadi luviwo olukhethisayo (multiple-choice questions) olubhalwe ngesiNgesi kuphela. Lwahlulwa-hlulwe lwangamacandelo amabini, o.k.t. iSigaba seSiseko neSigaba esiPhakamileyo. Luya kubhalwa kuphela ngo-09:00 ukuya kutsho ku-12:00 ngoLwesine, nge-11 Meyi 2017. Umhla wokuvala ukubhalisela uviwo eNtshona Koloni nguLwesibini, we-28 Februwari 2017.
6. I-WCED izimema zonke izikolo kwakhona ukuba zithathe inxaxheba kwiOlimpiyadi ka2017. Kucelwa izikolo zizalise yaye zisayine ezi fom zobhaliso ziqhotyoshelweyo (iziHlomelo A no-B) zizibuyisele kweyona ofisi yesithili ikufutshane okanye kwiziko lesayensi elidweliswe kwisiHlomelo C. Makuqinisekiswe ukuba ikopi yerisithi yentlawulo iqhotyoshelwe kwifom yobhaliso. Zonke iifom zobhaliso eziqhotyoshelweyo mazifike kwii-ofisi zezithili ezahlukeneyo kunye/okanye kumaziko esayensi engadlulanga u-14:00 ngoMvulo, we-27 Februwari 2017.
7. Intlawulo yokuthatha inxaxheba kwi-Olimpiyadi yi-R10.00 ngomfundi ngamnye. Le mali mayidiphozithwe ngqo kwi-akhawunti yebhanki ye-SAASTA. Iinkcukacha zebhanki zibhaliwe kwifom yamangeno. Akukho mqathango umiselweyo omalunga nenani labafundi abanokungenela olu viwo.
8. I-WCED iya kuhlawulela amangeno abafundi abakwizikolo ezingayihlawuliyo imali yokufunda kunye nezo zeMathematika, iSayensi neThekhinoloji (Mathematics, Science and Technology)MST. Zonke ezi zikolo mazithumele amangeno abafundi bazo kuSuanne Rampou ungadlulanga uMvulo we-27 kaFebruwari 2017 ngentsimbi yesi-15 :00. Izikolo zinako ukuskena ziwathumele nge-imeyili amangeno azo ku-: Suanne.Rampou@westerncape.gov.za okanye ziwathumele ngefeksi ku-086 205 1450.
9. Kucelwa izikolo zikugcine ukuthembeka (integrity) kwe-Olimpiyadi ngokubagada ngenyameko abaviwa xa bebhala. Siya kukhutshwa ngaphandle kwengxoxo isikolo esiye sachaphazeleka kwisitenxo (an irregularity).
IsiHlomelo A & B: "2017 Natural Science Olympiad Entry form" (ubukhulu: 186 KB)
IsiHlomelo C: "Natural Science Olympiad Administration 2017" (ubukhulu: 29 KB)